नयाँ तथ्य फेला यौन सम्पर्क सुरु हुनु अघि ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् महिला ? – तहल्काखबर
जीवनशैली मनोरञ्जन स्वास्थ्य
नयाँ तथ्य फेला यौन सम्पर्क सुरु हुनु अघि ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् महिला ?
पुरुषहरु अधिकाँश समय यौनका लागि तयार रहेपनि महिलाको अलि फरक हुन्छ । उनीहरु थाकेको बेला वा निद्राको बेला उत्तेजित हुने सम्भावना निक्कै कम हुन्छ । त्यस्तै उनीहरु थाकेको बेला यौन आनन्दमा पुर्याउँछु भन्नु पनि मुर्खता हुन्छ । नेपाल समाचारपत्र
← पुनर्निर्माण प्राधिकारणको सीईओमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त
लागुऔषध तस्करीको नयाँ तरिका, गाँजा तस्करी गर्ने दुईजना भारतीय नागरिक पक्राउ →